Iinkqubo zokubeka iliso ekusebenzeni kweekhompyuter simahla | Iindaba zeGajethi
UPaco L Gutierrez | | ngokubanzi, Iikhompyuter
I-pc ngumatshini odityaniswe nezinto ezahlukeneyo zehardware ezenza ukuba zisebenze ngemvumelwano echanekileyo, kodwa ayisoloko isebenza yonke into njengoko kufanelekile ukuba isebenze kwaye ngaphandle kwezixhobo eziyimfuneko okanye ulwazi, abasebenzisi abangaqhelananga babonakaliswa ngokupheleleyo kukungasebenzi kakuhle.okanye ukusetyenziswa kakhulu kwezixhobo ngaphandle kokwazi ukuba yintoni unobangela. Singaqonda njani ukuba utshintsho kwiprosesa okanye kwimizobo inefuthe elihle ngokwenyani yokuphuculwa kokusebenza? Kukho iinkqubo ezithile ezinikezelwe ngokukodwa.
Ayisiyo isixhobo esilula seGamers abakhangela elona zinga liphezulu lesakhelo ngomzuzwana, okanye inqanaba eliphezulu lokubala kweeprosesa zabo, kubalulekile ukuba ubone indlela ipc yethu eziphatha ngayo ebusweni balo naluphi na ubalo okanye imemori efunekayo, ukusukela ngokowuphi umsebenzi ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nomthamo wecompyuter yethu kubaluleke kakhulu. Kakhulu oko Abenzi abaninzi banegalelo kwiinkqubo zabo ukwenza ubomi lula kule nkalo.
1 Yeyiphi imiba yePC yethu ebekwe esweni kwaye ngoba
1.1 Imiba ebaluleke kakhulu:
2 Izixhobo zendalo zeWindows
3 Izixhobo zemveli zeMacOS
4 Isoftware yasimahla yokujonga i-PC yethu
4.1 I-HWiNFO: Jonga ubushushu bepc yethu ngeendlela ezininzi
4.2 Imvula: Yenza idesktop yakho ibe yeyakho kunye neewijethi zolwazi
4.3 I-MSI Afterburner: I-overuls ye-CPU kunye ne-GPU
4.4 I-EVGA Precision X1: Eyona ilungileyo xa isiza kwi-GPU ngaphezulu
Yeyiphi imiba yePC yethu ebekwe esweni kwaye ngoba
Isenokwenzeka kuwe ngesiquphe ikhompyuter yakho iqala ukuthoba isantya, kakhulu ukuze ube nokuzilahlela, uyeva ukuba i-hard drive yakho ayiyeki ukubhala kunye nokufunda ulwazi kwaye ukuba uzama ukuvula isicelo okanye ubhale yonke into ihlupheka ngokulibaziseka okukhulu. Awazi ukuba kwenzekani kwaye ngesiqhelo ngenxa yokufakwa ngokungakhethiyo kwezicelo kwikhompyuter yethu.
Zihlala zizicelo ezincinci, kodwa zisebenzisa ipesenti ephezulu yezixhobo zethu. Iikhompyuter zethu zinezivamvo kwinto nganye kuzo ukuze kuthi xa kufunyaniswa isifo sixelelwe indlela esiziphethe ngayo nganye nganye, ngale ndlela ukuze sikwazi ukufumana ingxaki esihluphekayo kuyo.
Imiba ebaluleke kakhulu:
Umsebenzi we-CPU: Le yingqondo yekhompyuter yethu, eyenza yonke into isebenze ngelixa siyisebenzisa, apha siyabona ukuba le nto siyenzayo ngalo mzuzu iyazalisa izixhobo zezixhobo zethu.
Imemori ye-RAM: Nantsi sinako ukubona ukuba sinezicelo kwimemori yokutya okungasemva Yekhompyuter yethu, oko kuthetha ukuba umzekelo iphepha lewebhu akufuneki liphinde lilayishe kwakhona ukuba sichitha ixesha elilungileyo ngaphandle kokulijonga, oku kuyanconywa ukuba sisebenza ngobuninzi beefestile ezivuliweyo.
Ukugcina kunye ne-hard driveKweli candelo siza kubona ukubanako kokubini komthamo wezixhobo zethu kunye nomgangatho wokubhala nokufunda onazo kwiidrive hard, ukubona nayiphi na indlela yokuziphatha engaqhelekanga.
Ibhetri kunye namandla: Abavelisi bebhodi yomama abaninzi babonelela ngeenkqubo ezithile zeli candelo, ezibaluleke kakhulu lawula ukusetyenziswa kwamandla kwikhompyuter yethu, kuba sinokuchitha amandla amaninzi kunokuba sifuna.
Umsebenzi wenethiwekhiOkokugqibela sinomsebenzi wenethiwekhi ye-intanethi, apho silawula ukuhamba kwedatha engenayo kwaye ishiye ikhompyuter yethu. Abanye iinkqubo esizifaka ngengozi zinokuqokelela ulwazi ngenethiwekhi yethu ye-intanethi ngaphandle kokuyiqonda.
Izixhobo zendalo zeWindows
Ukuba into esiyifunayo sisiseko esisiseko sezixhobo zethu, akukho mfuneko yokuba ubhenele kwiinkqubo zomntu wesithathu. Okona kulungileyo sinokufikelela kuko nguMlawuli woMsebenzi weWindows uqobo, apho siya kuba nokufikelela kolona lwazi lubalulekileyo kusetyenziso lwezixhobo.
Kulo mlawuli sinokukhetha okungakumbi nangakumbi: I-CPU, i-RAM, iinkqubo, iinkonzo, inethiwekhi kwaye kutsha nje umsebenzi wegrafu wethu wongezwa. Ngokwenyani, nokuba ivela kubantu besithathu kunzima ukufumana inkqubo epheleleyo kunale kwaye eyona nto intle kukuba idityaniswe ngokupheleleyo kwinkqubo yethu yokusebenza.
Icala elisezantsi kuphela kule nkqubo luyilo, kuba alunanto yakwenza nezo zinikezelwa ngabavelisi bezinto. Ukongeza, asinakho ukubeka iiwijethi kwiscreen, esenza kube lula ngathi ukuba sazi ngalo lonke ixesha Ukusetyenziswa kwezixhobo ngexesha lokwenyani. Into eluncedo kakhulu ukuba sifuna ukuvavanya iinkqubo okanye imidlalo yevidiyo kwaye ubone ukuba yeyiphi ifuthe kwiqela lethu.
Izixhobo zemveli zeMacOS
I-OS X yinkqubo evaliweyo kakhulu, kodwa ubuncinci bolawulo malunga nokwenzekayo ngaphakathi kuyo, ngale ndlela sinokufumana ulwazi malunga nayo yonke idatha esisiseko yokubeka esweni. Singakwenza oku ngaphandle koncedo lwayo nayiphi na inkqubo yangaphandle, ngqo nesicelo Umsebenzi wokujonga umsebenzi. Esiza kuyifumana kwicandelo le- "Izicelo" eyethu Finder.
Kule sicelo sifumana uluhlu oluhleliweyo lwazo zonke izicelo ngokokusetyenziswa kwazo ngexesha lokwenyani, I-CPU, i-RAM, amandla, idiski kunye nenethiwekhi. Ukusuka apha sinako nathi nyanzela usondele saso nasiphi na isicelo esisibona sifanelekile. Ngale ndlela siyakuphepha ukusetyenziswa ngokungathandekiyo kwaso nasiphi na isicelo kunye nokwenza uvavanyo lokuqinisekisa ukuba onke la macandelo asebenza ngokuchanekileyo.
Ukusoloko unesicelo esifanelekileyo kulungile, ngakumbi ukuba kwimeko yethu iMac ikwiminyaka ethile, eyenza ukuba ibenzima ngakumbi kukuhlutha ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kwezixhobo. phambili singasebenzisa i-icon ye-doc ukubonisa ulwazi olusisiseko Njengomsebenzi we-CPU yethu okanye ukubhala kunye nokufundwa kwediski yethu.
Isoftware yasimahla yokujonga i-PC yethu
Apha sinezinto eziphambili esizibonelelwa ngabaphuhlisi ngokwesoftware yasimahla yokujonga iinkqubo kwikhompyuter yethu, akusoloko kulula ukufumana eyona ilungele thina, ke sizokucebisa ngeendlela ezo zisenza siqiniseke .
I-HWiNFO: Jonga ubushushu bepc yethu ngeendlela ezininzi
Le nkqubo iyakwazi ukufunda nayiphi na inkqubo okanye ipharamitha kwiPC yethu. Siza kuba nolawulo lwazo zonke izixhobo zentsimbi zePC yethu. I-CPU, i-GPU, i-VRM, i-Chipset, amaqondo obushushu kwiHard Drive kunye neeVoltage. Icala elisezantsi kuphela yimbonakalo yalo, ethi ukongeza ekubeni ingabonakalisi intuitive kakhulu, ayisiyiyo intle kakhulu okanye ilula emehlweni, oko kukuthi ukuba inani lolwazi elinikezelayo alinakuthelekiswa nayo nayiphi na enye inkqubo.
Isebenza nazo zonke iinguqulelo zeWindows kwintengiso, ukusuka kwi-XP ukuya kwi-W10, iyahambelana nayo ngama-32 kunye nama-64 amasuntswana. Esi sisixhobo sasimahla kwaye sicebisa ukuba sizame nakubani na ofuna olu hlobo lwenkqubo.
Khuphela i-HWINFO simahla koku LINK.
Imvula: Yenza idesktop yakho ibe yeyakho kunye neewijethi zolwazi
Abasebenzisi abaninzi abafuni nje ukujonga ikhompyuter yabo, bafuna ukuyenza ngesitayile, le nkqubo isinika ukubeka iiwijethi kwidesktop yethu ngolwazi olufanelekileyo malunga nokubeka iliso kuyo yonke ikhompyuter. Sinokukhetha uyilo lweewijethi ezinjengebala okanye ubungakanani bazo, ezenza yonke into ibe luyilo olwahlukileyo ukuthanda kwethu.
Siyakwazi ukubeka esweni i-CPU yethu kunye namanye amacandelo, amaqondo abo obushushu kunye nokongeza ii-bar zendlela emfutshane, ukongeza ekubeni yinkqubo yasimahla ikwalungele nokwenza eyethu imifanekiso yamaphephadonga.
Khuphela iRainmeter simahla koku LINK.
I-MSI Afterburner: I-overuls ye-CPU kunye ne-GPU
Inkqubo yexesha elide, esetyenziswa ngokubanzi ngabadlala umdlalo abafuna ukugqithisa kwi-GPU yabo. Kodwa owona mgangatho ufunwa kakhulu ngabasebenzisi bawo kukubeka iliso kwi-FPS ngelixa sidlala imidlalo yevidiyo kwaye siyilayisha kuzo zonke izixhobo zekhompyutha. Inika ulwazi olungapheliyo kwaye iyahambelana phantse nazo zonke izixhobo ezikhoyo. Ngokubhekisele kwi-overulsing inezithintelo.
Ibandakanya iRivatuner esibonelela ngeendlela ezahlukeneyo ngokubhekisele kwimilinganiselo yokufunda yomdlalo kunye nezixhobo zethu. Sinokwenza iHub Statistics Hub ukuyibonisa ngelixa sidlala. Ubuhle bunokuqiqa kakhulu kwaye bunikezela uyilo olunomdla kakhulu.
Khuphela iMSI Afterburner kule LINK
I-EVGA Precision X1: Eyona ilungileyo xa isiza kwi-GPU ngaphezulu
Le nkqubo inikezelwe ngokukodwa kubasebenzisi abafuna ukubekwa esweni ngakumbi kwe-CPU kunye ne-GPU, kunye yenza eyona nto ibalaseleyo. Asinakufumana usetyenziso olungcono kuyo yonke imakethi.
Isinika ukujonga ngokugqibeleleyo zonke iiparameter, ezinje ngamaza, amandla, ubushushu kunye nevolthi kunye Singaziguqula nganye nganye ngokokuthanda kwethu kumakhadi emizobo yeNvidia. Ukugqithisa ngale nkqubo kuya kuba lula kwaye kube yinto yesiqhelo.
Khuphela i-EVGA Precision X1 yasimahla koku LINK.
Yenye yeenkqubo ezaziwayo kakhulu kwicandelo lazo kwaye yenye yezona zidala esinokuzifumana. Ngayo siya kuba nakho ukwazi nzulu izibilini zekhompyuter esiziphatha ngokuchofoza ngokulula okumbalwa.
Isetyenziselwe isiqhelo wazi zonke iinkcukacha zekhompyuter ye-PC, bobabini ngabasebenzisi kunye neengcali, kodwa into enomdla kuthi kukuba iyakwazi ukubeka iliso kwinto nganye kwezi kunye nezinto zazo ukusebenza kwexesha langempela kwaye ngokufanelekileyo.
Ukongeza koku, sinokuqhuba iimvavanyo zokusebenza ukuze sifumane ukusebenza kwekhompyuter ukuze sikwazi ukuthelekisa nabanye, iluncedo kakhulu xa sifuna thelekisa izixhobo esizithengayo kunye nesele sinazo. Icala elisezantsi kuphela esilifumeneyo kukuba oku kuchasene nolunye uluhlu ayihlawulelwa.
Sifumana iinguqulelo ezininzi kwaye zonke zihlawulwa ngamaxabiso aphakathi 39,99 € kwezona zihambele phambili ezifikelela 199,90 €. Konke oku kwiphepha laseburhulumenteni kule LINK.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iinkqubo zokubeka iliso ekusebenzeni kweekhompyuter simahla